Mutengi ruzivo mushure mekutenga | ECommerce nhau
Susana Maria Urbano Mateos | | ECommerce kudzidziswa, Kutengeswa kweIndaneti
Mutengi ruzivo yakakosha mu nzira yekutenga. Mazhinji emabhizimusi egore anoziva kukosha kwebasa revatengi mumatanho ekutenga. Nekudaro, mazhinji anotarisa chete pane iyo logistics cheni kusvikira iyo nguva chigadzirwa chasvika pamaoko emutengi, kukanganwa kukosha kwekupa basa rakanaka kunyangwe mushure mekutengwa kwaitwa.
Nekuwedzera ketani yedu mamwe matanho mashoma tinenge tiine maturusi anobatsira zvikuru anotibatsira kunatsiridza kutengesa kwedu uye kuwedzera mari.
Chikamu chakakosha kwazvo ndiyo sevhisi yakapihwa mutengi panguva yekusahadzika nezve chako chigadzirwa kana sevhisi. Kazhinji yenguva izvi zvinoreva kusahadzika nezve iyo kushanda kana kugadzirisa kudiki. Zvakakosha kuti isu tive nenhare, kungave nerunhare kana kuburikidza newebhu, matinogona kupa kukoshesa vatengi, nekuti mutengi anogutsikana anova mutengi zvakare.
Chimwe chinhu chakakosha nezve chengetedza chiteshi chekutaurirana nemutengi mushure mekutenga, ndiko kugona kumuita kuti azive nezve izvozvi kukwidziridzwa uye kupihwa. Kazhinji mapurogiramu emubairo evatengi anogona zvakare kubatsira zvikuru. Simply iye tumira email Newechokwadi "Ndatenda nekutenga kwako" unogona kuita mutsauko pakati pemutengi anogutsikana neuyo asina kunyatsogutsikana.
Pakupedzisira, tinogona kuvhara ngetani yedu kusvikira tavhunza mutengi nezve yake ruzivo rwekutenga. Kukurumidza uye kupfupisa kuongororwa kunogona kuita mutsauko wakawanda. Hazvikuvadze kupa diki diki yekuwedzera mukutsinhana kupindura ongororo.
Kana chiri chokwadi kuti vazhinji vevatengi vanozozviramba, pachave nechikamu chakakosha chinochipindura, zvichitibvumidza kuti tizive zvakawanda nezve maitiro edu ekutengesa, pamwe nenzira dzekuzvivandudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Mutengi ruzivo mushure mekutenga
Unyanzvi hwepamhepo, mukana wakanaka